China N-Formyl Morpholine (NFM) vagadziri uye vanotengesa | Kuzvipira
Chigadzirwa: N - FORMYL MORPHOLINE
CAS Kwete.: 4394-85-8
Molecular Kurema: 115.13
N-formylmorpholine (NFM) yakakosha organic solvent uye yakanaka chemakemikari mbishi zvinhu. Imvura isina ruvara uye yakajeka pane tembiricha yemukati. Iine makemikari eamide. Yayo aqueous solution iri nyore hydrolyzed kupinda morpholine uye formic acid pamberi peacid kana alkali, uye aqueous solution haina kusimba alkaline.
N-formylmorpholine yakasarudzika yekubvisa solvent yekugadzirira kweanonhuwirira, uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira tambo uye nedzimwe nzvimbo.
Iyo inoshandiswa pakukanganisa gasi rechisikigo, synthesis gasi, flue gasi, gasi chaiyo condensate mafuta uye peturu; ndiyo solvent solvent ye petroleum aromatics mudziyo, iyo inogona kushandiswa kugadzirisa aromatics neyakawedzera distillation. Ine sarudzo yakanaka, kudziya kwemafuta uye kugadzikana kwemakemikari Zvakanaka, zvisina chepfu, zvisina kukuvadza. Iyo solvent inoshandiswa zvakanyanya yekudzoreredza anonhuwirira mahydrocarbon. Icho chakanakisa aprotic solvent ine yakakwirira solubility uye kusarudza kweanonhuwirira. Musanganiswa wayo wakashandiswa zvinobudirira mune aromatics dhizaini maitiro uye butene yekumanikidza maitiro.
Inokwana kugadzirwa kugona, isu tinogona kuronga kutumira kwacho kwauri munguva.
Tinogona kuumba inonzwisisika nzira dzekubhadhara maererano nemhando dzakasiyana dzevatengi. Mamwe mazwi ekubhadhara anogona kupihwa
• Uye ichagadzira yakakwana Kuisa Chirevo kumutengi wedu pane imwe neimwe yekutumirwa.
Pashure: Phenyl dichlorophosphate